Xasuuqii Maraykanka ka geystay Raqqa Siiriya oo la shaaciyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xasuuqii Maraykanka ka geystay Raqqa Siiriya oo la shaaciyey
Xasuuqii Maraykanka ka geystay Raqqa Siiriya oo la shaaciyey
April 26, 2019 - By: Hanad Askar
Hay’ada Amnesty International iyo Airwars ayaa Khamiistii shalay shaaciyey xogta tirada shacabkii lagu xasuuqay duqeyntii Maraykanka la beegsaday magaalada Raqqa, Siiriya oo xarun u ahaan jirtay kooxda Xagjirka ah ee Daacish.
Hawlgalkii Maraykanka, UK iyo France la beegsadeen xarunta Daacish sanadkii 2017 ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 1.600 qof oo shacab ah, tiradan oo aad uga badan tiradii ay qirteen ciidamada dalalkaaasi inay ku dileen hawlgaladooda.
Baaritaan socday muddo bilo ah oo ay wadeen labada hay’adood ayaa lagu ogaaday inay 10 jeer ka badan tahay tirada shacabka ku dhintay duqeynta Maraykanka iyo xulafadiisa ku qaadeen dhulkaasi.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in Shacabka Raqqa ay dhexda u galeen isla markaana ka horjoogsadeen inay isaga qaxaan magaaladaasi maleeshiyaadka Daacish oo dhulka ku aasay miinooyin halka dhinaca kale duqeyn aan kala sooc lahayn uga imaaneysay Maraykanka & xulafadiisa.
Halkan ka akhriso warbixintan oo Faah Faahsan